Tsena kaontenera Ankorondrano :: Nomena fe-potoana hiasa valo volana ireo mpivarotra hani-masaka • AoRaha
Tsena kaontenera Ankorondrano Nomena fe-potoana hiasa valo volana ireo mpivarotra hani-masaka
Nahatsiaro tena ho voafitaka. Tsy misy mahalala ireo mpivarotra hani-masaka nafindra amin’ny tsena kaontenera, eny Ankorondrano, fa vonjimaika ihany no hamindrana azy ireo amin’io toerana io. Fantatra fa valo volana ihany no ahafahan’ireto farany manao ny asa fivarotany amin’ity tsena vaovao ity.
Isan’ny tafiditra tao anatin’ilay fanatsarana natao tao amin’ny fokontany Tsaramasay, Ankorondrano Andrefana ary Ankorondrano Andranomahery, ny famindrana ireto mpivarotra ireto raha teo ambony tetezana hatramin’izay no nisy azy ireo. «Tena tsy mahafantatra izany fe-potoana izany mihitsy izahay fa natao ady an-kafetsena raha izany no nanalana anay teny amin’ny toeranay taloha. Tokony nisy ihany ny fifampierana fa tsy nofitahina ny mpivarotra. Raha sanatria ka tsy maintsy misy indray ny fanalana anay eto dia handeha ho aiza izahay no hivarotra», hoy ny fitarainan’ny mpivarotra iray, eny an-toerana.
Ny fanjakana no nametraka io fe-potoana ahafahan’ny mpivarotra mijanona amin’io toerana malalaka eo Ankorondrano io. Tsy maintsy mitady toerana hafa indray, noho izany, izy ireo. «Vonjimaika ihany no afaka mivarotra amin’ity toerana ity ireo mpivarotra ireo. Valo volana no nomen’ny Antenimieran’ny varotra, izay tompon-tany, Mitady ny tsenany amin’izay ireo olona ireo aorian’izay. Mbola fananam-panjakana ireo hatreto dia tsy maintsy mandany izany fifanarahana amin’ny fanjakana izany. Hatramin’izay anefa nipetraka fotsiny io tany io ka raha misy ny fivoarana sy fanajana ny tsena dia hiezaka hifampiraharaha amin’ny tompon tany aho», hoy Ramanantany Alain, lehiben’ny fokontany Ankorondrano Andranomahery.Nilaza ny hampivory ny mpivarotra amin’ny fandaminana izay atao kosa ny lehiben’ny fokontany.
Fanadinam-panjakana :: Voatazona ny daty hanatanterahana ny CEPE sy ny BEPC